Vavolombelon'i Jehovah - Wikipedia
Ny Vavolombelon'i Jehovah dia fikambanana kristiana mino ny fitondran’ny Mesia mandritra ny arivo taona (milenarisma) sy mihevi-tena ho mamerina amin’ny endriny tany amboalohany ny fivavahana kristiana (restaorasionisma). Io fikambanana io dia nipoitra avy amin'ny fikambanana atao hoe "Bible Students" (azo adika hoe "Mpianatra Baiboly" notarihin'i Charles Taze Russell izay nandray ampahany betsaka tamin'ny fampianaran'i William Miller, indrindra tamin'ny adventisma, tamin'ny alalan'ireo mpitoriteny adventista toa an'i Jonas Wendell. Isan'ireo atao hoe "fiangonana zandriny" ny Vavolombelon'i Jehovah sady misy koa ny manao azy hoe "sekta". Mampiavaka azy ireo ny mitory teny sy mampianatra ny Baiboly isam-baravarana.
2.2 Tamin'ny fitantanan'i Joseph Franklin Rutherford
2.3 Tamin'ny fitantanan'i Nathan Knorr
2.4 Fitantanana taorian’i Nathan Knorr
3 Ny finoan’ny Vavolombelon’i Jehovah
3.2 Ny asa soratry ny Vavolombelon'i Jehovah
3.5 Ny fiainana aorian’ny fahafatesana
3.6 Ny Fanjakan’Andriamanitra
Ny andian-teny hoe Vavolombelon’i Jehovah dia fandikana amin'ny teny malagasy ny hoe Jehovah’s Witnesses ka manondro ny fikambanana na ny mpikambana tsirairay (azo hafohezina fotsiny amin’ny hoe Vavolombelona). Hita ao amin’ny Baiboly mbola mampiasa ny teny hoe Jehovah io andian-teny io (Isaia 43.10) ary nampiasaina ho solon’ny hoe Bible Students (“Mpianatra Baiboly”) nanomboka tamin’ny taona 1931 tamin'ny andron'i Rutherford.
Nanangana ny fikambanana atao hoe Bible Student Mouvement ("Fikambanan'ny Mpianatra Baiboly") i Charles Taze Russell tamin'ny taona 1870 tao Pittsburgh any Pensylvania any Etazonia. Notoheriny ny finoan'ny ankamaroan'ny Kristiana toy ny amin'ny tsy fahafatesan'ny fanahin'olombelona, ny afobe, ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray ho nofo, ny fanendren'Andriamanitra mialoha ny ho avin'ny olombelona tsirairay ary ny Trinite. Aminy dia tsy misy ny afobe, mety maty ny fanahin'olombelona ary hiverina ety an-tany i Jesosy Kristy nefa tsy ho hita maso.
Namoaka ny boky atao hoe Three Worlds (azo adika hoe Tontolo telo) izy sy i Nelson H. Barbour (mpitoriteny nanaraka ny fampianaran'i William Miller). Io boky io dia niresaka ny amin'ny andro farany, ny amin'ny fahatongavan'i Kristy fanahy tamin'ny taona 1874 mba hisantatra ny fijinjana ny vokatry ny Filazantsara ("hanavaka ny vary sy ny tsimparimpary"). Nanambara koa izany boky izany fa ny taona 1914 no namarana ny 2520 taona atao hoe "Andron'ny Jentilisa" sady hahafoana ny fitondran'olombelona eto amin'izao tontolo izao izay hosoloana tanteraka ny Fitondran'Andriamanitra. Nambaran'i Russell fa amin’ny taona 1818 no hahatongavan’ny ady ao Hara-magedona hifanaovan'ireo mpanjakan'izao tontolo izao amin'Andriamanitra. Nolazainy fa maro amin’ireo teraka talohan’ny taona 1914 no hiatrika ny fahatongavan’izany ady izany. Nisaraka noho ny tsy fitovian-kevitra i Charles Taze Russell sy i Nelson H. Barbour tamin'ny taona 1879.
Nanomboka ny taona 1879 dia nivory ireo mpanaraka an'i Russell mba hianatra ny Baiboly ao anatina fikambanana. Fikambanana 30 no voatsangana tamin’izany izay samy nizaka tena. Nanangana ny Watch Tower Society amin'izay i Russell tamin’ny taona 1881, izay namoaka ny boky atao hoe Watchtower (Ny Tilikambo Fiambenana amin'ny teny malagasy, La Tour de Garde amin'ny teny frantsay). Ny tanjony amin’izany dia ny hanaporofo fa efa ao amin'ny andro farany isika izao sady ny andro vaovao hanavaozana ny tany sy ny olona dia efa antomotra. Tamin’ny 1881 dia i William Henry Conley no nitantana ny fikambanana Watch Tower Society. Fizaràna trakta sy Baiboly no asa nataon’io fikambanana io. Araka ny La Tour de Garde tamin'ny 1881 dia hiaka-belona i Russell sy ny mpianany.
Tamin’ny taona 1910 dia nahatratra tany amin’ny zato any ho any ny mpitoriteny mandehandeha. Natao hoe “International Bible Students Association” (azo adika hoe "Fikambanana Iraisam-pirenen’ny Mpianatra Baiboly") ny fikambanana tamin’izay. Nafindra tany Brooklyn ao New York ny foiben’ny Watch Tower Society. Tamin’izany dia efa nahatratra 50 000 ny isan’ny mpikambana. Tamin’ny taona 1912 dia i Russell no mpanoratra namoaka gazety maro indrindra tao Etazonia. Maty tamin’ny 31 oktobra 1916 izy tamin’ny faha 64 taonany.
Tamin'ny fitantanan'i Joseph Franklin Rutherford
Tamin’ny Janoary 1917, i Joseph Franklin Rutherford, mpisolo tena ny fikambanana eo anatrehan’ny Fanjakana, dia lany ho filoha hitondra ny fikambanana izay nantsoina hoe “Watch Tower Bible and Tract Society”. Nisy tamin’ireo mpikambana ao amin’ny Filankevitra ny nitsipaka izany fahalaniany izany. Tamin’ny volana Jona 1917 dia nivoaka ny boky iray, izay atao hoe The Finished Mystery (azo adika hoe "Ilay Zava-miafina Tanteraka", Le Mystère Accompli amin'ny teny frantsay), izay nanangonana ny fanaovan’i Russell heviteny momba ny Bokin’i Ezekiela sy ny bokin’ny Apokalypsy, izay nisy fanovonana nataon’i Clayton Woodworth sy i George Fisher, samy mpianatra Baiboly. Araka ny voalaza ao amin'io boky io dia hisy fikorontanam-be ny eo amin'ny fanjakan'olombelona sy eo amin'ireo fiangonana kristiana anarany izay ho rava tanteraka.
Nisy fitsikerana ny fandraisan’anjaran’ny Kristiana tamin’ny Ady Lehibe sy ny mpitondra fivavahana katolika sy protestanta izany boky izany. Notsikerainy koa ny fampiasana miaramila sy ny fanindrahindran-tanindrazana. Nogadraina tamin'izany ny mpitantana ny Watch Tower Bible and Tract Society tamin’ny taona 1918 fa natao hoe manohitra ny lalàna momba ny asam-pitsikilovana. Ny mpikambana hafa koa dia niharan’ny herisetram-bahoaka. Tamin’ny taona 1919 dia novotsorana ireo mpitarika.
Nandritra ny 25 taona nitondran’i Rutherford dia maro ny fampianarana sy ny faminaniana nipoitra. Isan’izany ny fanambaràna tamin’ny 1920 ny amin’ny hitsanganan’ireo Patriarkan’ny Zanak’i Israely ho velona amin’ny taona 1925, dia i Abrahama sy i Isaka sy i Jakoba ary i Davida. Izany no hiantombohan’ny Fanjakana arivo taonan’i Kristy. Noho ny tsy fahatanterahan’ny zavatra voalaza amin’ireo fanambaràna ireo dia maro ny mpikambana niala tamin’ny Watch Tower Bible and Tract Society ka nanangana fikambanana mpianatra Baiboly hafa. Tamin’ny taona 1930 dia nambaran'i Rutherford fa tamin’ny taona 1914 no nanomboka ny fanatrehan’i Kristy (atao hoe “parosia”) sy ny fametrahana azy ho mpanjaka. Nanomboka tamin'izany taona izany ihany koa, hoy izy, ny Andro farany.
Tamin’ny 26 jolay 1931, dia novana ho “Jehovah’s Witnesses” ("Vavolombelon'i Jehovah") ny anaran’ny Watch Tower Bible and Tract Society. Tamin’ny 1932 dia ny fandaminana vaovao atao hoe Teokrasia ("fitondran’Andriamanitra") no najoron’i Rutherford hitantana ny fikambanana nefa, raha ny tena marina, dia ny tenany no lasa nitondra tokana. Nanomboka tamin’ny taona 1932 no nampielezana fa “ondry vitsy” miisa 144 000 no hiaina ao an-danitra ka ny sasany amin’ireo dia olona nitsangana ho velona na olona hiakatra velona avy hatrany any an-danitra. Hiaraka amin’i Kristy izy ireo hanjaka amin'ny olona rehetra eto an-tany. Ny mpino hafa rehetra ao amin’ny fikambanana dia hiaina mandrakizay ao amin’ny paradisa izay hataon’Andriamanitra eto an-tany. Nihanatanjaka ny fiheveran’ireo Vavolombelon’i Jehovah fa fanompoan-tsampy ny fanajana ny sainam-pirenena. Niharan’ny herisetra noho izany ny Vavolombelona sady tsy faly koa ireo governemanta tamin’ny firenena maro toa an’i Etazonia sy i Kanada ary i Alemaina.
Nanomboka tamin’ny taona 1938 dia nofoanana ny fifidianana ireo mpitantana ny fikambanana fa fanendrena teokratika no natao. Nandritra ny fitondran'i Rutherford dia tsy azo atao ny mankalaza ny noely (izay heveriny fa avy amin'ny fivavahan'ny mpanompo sampy), ny mankalaza ny fetin’ny reny (izay ataony ho isan'ny paika enti-mitaona ny olona hanohitra ny fanajana an'Andriamanitra), ny manao vaksiny (nofoanan’ny mpandimby azy ity fampianarana ity), ny mandray anjara amin’ny zavatra mahakasika politika. Zava-dehibe tamin'i Rutherford ny endriky ny hazo fijalian'i Jesosy ka ny hazo fijaliana mitanambokovoko (lakroa) dia nataony hoe famantarana avy amin’ny mpanompo sampy satria maty tamin’ny tsatokazo tokana, hoy izy, i Jesosy Kristy.
Maty tamin’ny 1942 i Rutherford.
Tamin'ny fitantanan'i Nathan Knorr
Voatendry hitondra ny Watch Tower Bible and Tract Society i Nathan Knorr tamin’ny taona 1942. Nanomboka tamin’ny taona 1945 dia tsy azon'ireo Vavolombelon'i Jehovah atao ny mamindra ra na ny amindrana ra nefa azo atao vaksiny indray izy ireo. Nampanao fandikan-teny vaovao ny Baiboly amin’ny teny anglisy (New World Translation of the Holy Scriptures) i Nathan Knorr ka vita tamin’ny taona 1961 izany. Avy amin’izany no nandikana ny Baiboly amin’ny tenim-pirenena hafa rehetra izay ampiasain'ny Vavolombelon'i Jehovah amin'izao fotoana izao. Namoaka fitsipi-pitondran-tena ny fikambanana. Tamin’ny 1966 no nilazan'i Nathan Knorr fa amin’ny taona 1975 no hanomboka ny fanjakan’i Kristy. Nihena ny isan’ny mpikambana taorian’ny taona 1975 rehefa tsy tanteraka ny faminaniany. Nanomboka tamin’ny taona 1976 dia nahena ny fahefan’ny filohan’ny fikambanana ka nafindra tamin’ny Filankevi-pitantanana ny fahefana amin'ny fanapahan-kevitra momba ny zavatra ampianarina sy ny fandaminana ny fikambanana. Maty tamin’ny taona 1977 i Nathan Knorr.
Fitantanana taorian’i Nathan Knorr
Hatramin’izao (2017) dia miisa telo ireo filoha nifandimby taorian’i Nathan Knorr. I Frederick William Franz dia nitondra hatramin’ny taona 1977 ka hatramin’ny taona 1992 izay nahafatesany tamin’ny faha 99 taonany. I Milton Henschel dia nitondra teo anelanelan’ny taona 1992 sy 2000. Ny Vavolombelon'i Jehovah nanomboka tamin'ny taona 1995 dia tsy niresaka intsony ny hoe "maro amin'ireo teraka talohan'ny taona 1914 no tsy maintsy hahita ny adin'i Haramagedona fahavelony".
I Don Alden Adams no nandimby an'i Milton Henschel nanomboka tamin’ny taona 2000. Nafindra any Warwick ny foiben’ny Watch Tower Bible and Tract Society tamin’ny taona 2009.
Tamin’ny Avrily 2017, ny Fitsarana Avo any Rosia dia nandrara ny Vavolombelon’i Jehovah, izay heveriny ho manatratra ny tanjony na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona, ka nanome baiko fanakatonana ireo sampany ao amin’io firenena io sy fandravana ny fikambanana rehetra isan-tanàna. Ny fikambanana izay misy mpikambana miisa 175 000 ao Rosia dia nampangaina ho manimba ny fianakaviana, ho mamporisika ny olona amin’ny fankahalana, ary mihevitra ny mpitondra ao Rosia fa loza ho an’ny fiainan’ny olombelona ny Vavolombelon'i Jehovah. Izany fandrarana izany dia nomelohin’ny Vondrona Eoropeana sy i Etazonia.
Ny finoan’ny Vavolombelon’i Jehovah
Ny Vavolombelon’i Jehovah dia mihevitra fa ny fikambanany no mamerina ny tena fivavahana kristiana nisy tany amin’ny taonjato voalohany (restaorasionisma) izay heveriny fa nisy fomba fitondrana tonga lafatra. Toy izao ny endrik’izany fiangonana kristina tany amboalohany izany, araka ny fahazoany ny voalaza ao amin'ny Baiboly:
Tsy samy manana ny fivavahany ny tsirairay tamin’izay, fa nivondrona ho fiangonana tokana. Miorina eo amin’i Kristy ny fiangonana. Tsy nampiasa sary ny Kristiana tamin’izay rehefa nivavaka. Tsy nasaina nitandrina ny andro Sabata izy ireo, tsy tahaka ny Zanak'i Israely tamin’ny fotoan’androny izay nasain’Andriamanitra nitandrina izany, satria nifarana niaraka tamin’ny Lalàn’i Mosesy izany fanao izany rehefa nanao sorona ny tenany i Jesosy. Anti-panahy (na loholona) no niandraikitra azy ireo, teo ambany fanaraha-mason’ny filankevi-pitantanana (frantsay: conseil d’administration) tany Jerosalema, ary i Jesosy no lohany. Nefa tsy nisy olona kilasina ho mpitondra fivavahana tamin’izany, tsy tahaka ny ao amin’ny fiangonana hafa. Milaza noho izany ny Vavolombelon'i Jehovah fa tsy misy famonjena azo tsy amin'ny alalan'ny fikambanany izay sady mpaminany no mahalala ny hevitr'Andriamanitra.
Ny asa soratry ny Vavolombelon'i Jehovah
Maro ny fampianarana aparitaky ny Vavolombelon'i Jehovah. Avoaka ho boky na trakta sy ampidirina anaty tranon-kala ireny fampianarana ireny ary atao amin’ny fiteny maro dia maro nefa ny ankamaroan’ireo boky sy gazetiboky tany aloha dia tsy hita raha tsy any amin’ny tranon-kala na tranom-boky hafa na ampahatsiahivin’ny boky hafa tsy an’ny fikambanana. Ny fiovaovan’ny fampianarany dia adikany ho vokatry ny fivoaran’ny fanambaràn’Andriamanitra ny sitrapony izay miseho miandalana (jereo: fanambarana mitohy). Izany, hoy izy ireo, dia fahazavàna vaovao vokatry ny asan’ny saina, ny fandalinana, ny fitarihan’ny fanahy masina (izay herin'Andriamanitra) sy i Jesosy Kristy ary ny anjely. Miorina amin’ny Tenin’i Jehovah, hoy izy ireo, ny fampianarany fa tsy amin’ny tenin’olombelona. Noho izany dia tokony hatoky tsy amim-pisalasalana ny fampianaran’ny Foibe ny mpikambana.
I Jehovah no anaran’Andriamanitra. Toriny sy ampahafantariny ny olona rehetra io anarana io. Amin’ireo Vavolombelon’i Jehovah, i Jesosy dia noforonin'Andriamanitra mivantana sady voalohany, zanak’Andriamanitra izy fa tsy Andriamanitra, sady ambany noho Andriamanitra. Ny zavatra hafa rehetra dia noforonin’i Jesosy avokoa. Ny fanahy masina kosa dia herin’Andriamanitra. Tsy mitambatra ho Trinite ny Ray sy ny Zanaka (Jesosy) ary ny fanahy masina. Ny hazo nijalian’i Jesosy dia tsy hazo mitanambokovoko fa tsatokazo tokana. Ho an’ny Vavolombelon’i Jehovah, i Jesosy dia tsy iza fa ny anjely Mikaela, na i Abadona na i Apoliona . Mpanalalana ny olombelona amin’Andriamanitra i Jesosy. Eken’ny Vavolombelon’i Jehovah fa amin’ny alalan’i Jesosy Kristy no amonjen’Andriamanitra ny olony. Tsy hita maso ny fiverenana na ny fanatrehan'i Jesosy Kristy.
Tany amboalohany, i Satana dia anjely noforonina tonga lafatra nefa niala an’Andriamanitra. Izy no nanome sain-dratsy an’i Adama sy Eva mba tsy hanaja an’i Jehovah. Nanjary demonia ny anjely izay nanaraka an’i Satana ka niteraka ny fahorian’ny olombelona. Noho izany, amin'ny Vavolombelon'i Jehovah, ny fitondran’olombelona dia eo ambany fibaikoan’i Satana.
Ny fiainana aorian’ny fahafatesana
Amin’ny Vavolombelon’i Jehovah, ny fahafatesana dia tsy fisiana sady tsy fahatsiarovan-tena. Ny Fiainan-tsi-hita, sy ny Hadesy ary ny Sheola dia manondro fotsiny izany toetry ny maty izany. Ny fanahin’olombelona dia tsy inona fa ny ainy ihany, izay mety maty. "Ondry vitsy" miisa 144 000 ihany no hampakarina any an-danitra fa ny maro amin’ny mpino Vavolombelon'i Jehovah dia hatsangana amin’ny maty ka handova tany voadio aorian’ny Hara-magedona sady ho velona mandrakizay. Ny olona isan’ny Vavolombelon’i Jehovah ihany no hahazo an’izany.
Amin’ny Vavolombelon’i Jehovah, ny Fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana ara-bakiteny any an-danitra izay anjakan’i Kristy sy ireo olona 144 000 avy aty an-tany “voahosotry ny fanahy”. Fahatanterahan’ny zavatra nokendren’Andriamanitra tany am-piandohana izany Fanjakana izany, dia ny hanao tany tsy misy na fahafatesana na aretina. Nanomboka tamin’ny Oktobra 1914 izany Fanjakana izany.
Tsy mamporisika ny olona hitady vahaolana amin’ny mpitondra na amin’ny manam-pahaizana olombelona ny Vavolombelon’i Jehovah satria ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no hamaha ny olana mahazo ny olona.
Araka ny finoan’ny Vavolombelon’i Jehovah, izao tontolo izao dia niditra tao amin’ny Andro farany nanomboka tamin’ny taona 1914 sady efa miandry ny fandravana izay ho tonga tsy ho ela. Naidina avy tany an-danitra i Satana miaraka amin’ny loza ho an’ny olombelona rehetra. Ny fiangonana kristiana hafa rehetra dia ho ravàn’ny Firenena Mikambana ary ny Vavolombelon’i Jehovah dia henjehin’i Satana. Izany no hanombohan’ny fidiran’Andriamanitra an-tsehatra ka hanombohan’ny ady ao Hara-magedona handravana ny fitondran’olombelona rehetra. Ny Fanjakan'Andriamanitra any an-danitra dia hiitatra ka hahazo ny tany izay hiova ho paradisa mitovy amin’ny Saha Edena. Hifoha tsirairay ireo izay maty talohan’ny Hara-magedona hiatrika ny “andron’ny fitsarana” izay haharitra arivo taona. Ny asany aorian’ny fitsanganany amin’ny maty no hitsarana azy fa tsy ny nataony talohan’ny nahafatesany. Rehefa tapitra ny arivo taona dia haverin’i Kristy eo amin’Andriamanitra ny fahefana. Hozahana toetra ny olona ka noho izany dia hovahan’Andriamanitra i Satana mba hanao asa famitahana. Ireo izay tsy maharitra ny fizahan-toetra dia haringan’Andriamanitra miaraka amin’i Satana sy ny demonia rehetra. Olombelona madio sy voazaha toetra no ho sisa hiaina ety ambonin’ny tany.
Maro ny andalan-tsoratra izay raisin'ny Vavolombelon’i Jehovah ara-bakiteny. Ohatra amin’izany ny amin'ny isa 144 000.
Amporisihin'ny ao amin'ny Filankevi-pitantanana hamaky ny Baiboly ny mpikambana nefa rarany tsy handray fampianarana manokana tsy nivoaka avy ao aminy. Tsy mahazo manao fitsikerana ny zavatra aelin’ny Filankevitra an-tsoratra ny mpikambana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vavolombelon%27i_Jehovah&oldid=996493"
Voaova farany tamin'ny 17 Aogositra 2020 amin'ny 12:08 ity pejy ity.